Kutheni WonderfulPCB - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Ukukhokela nylon డొమైన్ idomeyini Manaufacturer
PCB Wonderful njengomvelisi phambili kunye kwama-20 iminyaka amava PCB (Ishicilelwe Circuit Board) Industry.
Thina zibanga lokuvelisa nokuthengisa ophezulu-ngqo, uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi-mninzi PCBs kabini-lubangelwe kunye PCBs multilayer.
Umenzi ukubekwa lwabathengi iinkonzo ngqo iya kuthi win-win ulwalamano lwentsebenziswano!
Standards Quality Certified
Isizathu iqhosha sokuba singumbono PCB umenzi ethandwa abaxhasi ehlabathini lonke ukunamathela kwethu nemigangatho yobulunga engqongqo esebenza kuyo yonke indawo yoshishino yethu. Ngokomzekelo, PCBs zethu umgangatho ukuhlangabezana befuna IPC2 umgangatho umgangatho, ngoxa iibhodi zethu yesiqalo enziwa ukuphumeza ukuthobela IPC1. Ukongezelela, iinkonzo indibano yethu ekufezekiseni imfuno standard IPC3. Sicela ukuthobela ngokupheleleyo kunye ISO9001: Iinkqubo zolawulo lomgangatho 2008.
Umgangatho Guaranteed ngoPhicotho zethu ngoMgangatho-ndlu
Siye laphumeza inani amanyathelo asebenzayo ukungqinisisa umgangatho weenkqubo kunye neemveliso zethu. iitshekhi zethu iqela yobunjineli nazo zonke uyilo PCB phambi kokuqala kwesigaba yemveliso / ibandla ukuqinisekisa azikho iziphene semvelo kunye nokuba uyilo idibana iinkcukacha ngqo umthengi lowo. Sithatha inyathelo extra yokuqhuba Design for wokwenziwa (DFM) uvavanyo ngaphandle kwentlawulo engaphezulu. Kwakhona isebe control us arcade kubasebenzi ukwenza uhlolo olubanzi kunye nokuvavanywa phambi lokuthumela imveliso ogqityiweyo ukuba kwiziko lakho, kubandakanywa Test zoMbane, ngokwawo Optical Ukuhlolwa (AOI), ngokwawo X-ray Ukuhlolwa (-ziteksi), njalo-njalo Ungenza sithembele ngokupheleleyo nomgangatho PCB wakho kunye nokusebenza.
Gcina ixesha uze ube ngempumelelo ngakumbi
Sinikezela iinkonzo Pheleleyo Assembly Turnkey PCB, eziquka PCB awokuvelisa, icandelo procurement, kunye nebandla PCB. inkonzo yethu olunye-stop negates mfuneko ukuba uphathe abathengisi eziliqela kuzo amaxesha ahlukeneyo, nto leyo ebangela osisebenzisa ngendleko. Njengenkampani eliphakathi-ertyisi, thina sizihoye kakuhle iimfuno zabaxhasi bethu kwaye zinika inkonzo ngexesha nokungelolwakho ukuba iinkampani ezinkulu abakwazi kubadlali. ongumzekelo ireyithi lokwaneliseka iklayenti womyoleli ikhono lethu 'injezu.
amaxabiso abasebenzi bezempilo kunye nokhuphiswano
Enoba ufuna PCBs ezimbalwa okanye amawaka PCBs, uza kufumana iinkonzo best ixabiso kunokwenzeka PCB evela kuthi.
Sifuna ukuba ukunikela iinkonzo ephezulu ixabiso PCB kunye namava yokurhweba kakhulu ngexabiso elihle. Thina ukujongana amawaka amanani inxalenye qho ngonyaka kwaye kwiminyaka 20 ukusebenza ukuza kuthi ga ngoku, siye safunda indlela yokukhonza abathengi bethu nendlela yokukhonza kakuhle. Ezi zezinye zezinto abathengi bethu ezifana ngathi:
• Instant online ucaphule, ukuhlela ngokutsha neempawu
• Umgangatho qinisekisa iinkonzo
• ixabiso uKhuphiswano & NO min ubungakanani ukuze efunekayo
• 99% + umthengi rate lokwaneliseka
• Iqela inkxaso nolwazi olukhoyo ugqitha phone and email
• Free DFM ngetsheki iinjineli professional
• Uvavanyo Umsebenzi ngokusekelwe kwiimfuno zabaxumi ezizodwa
• Akukho ntlawulo tooling ezongezelelweyo reorders PCB
Nceda email wonderfulpcb@wonderfulpcb.com ulwazi olubanzi okanye Qhagamshelana US intanethi